I-Raw Flibanserin HCL powder (147359-76-0) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / Ukusetyenziswa kwabasetyhini / Flibanserin HCL powder
SKU: 147359-76-0. iindidi: Ukusetyenziswa kwabasetyhini, Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba lomlinganiselo weFlibanserin HCL powder (147359-76-0), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Flibanserin Hydrochloride, ezithengiswa phantsi kwegama elithi Addyi, inyosi ekhokhiswe njengendlela yokulungisa abafazi abane-Hypoactive Sexual Desire Disorder, ichazwa ngokuthi "ngokungahambiyo okanye ukungabikho kwanezocwangciso zesondo kunye nesifiso somsebenzi wesondo" ngobulili. Inkqubo yesenzo ayiqondi ngokupheleleyo.
Flibanserin hcl powder ividiyo
I-Raw Flibanserin i-hcl powder ezisisiseko
igama: Flibanserin Hydrochloride
I-molecular Formula: C20H21F3N4O · ICIH
Isisindo somzimba: 344.49
I-Raw Flibanserin i-hcl powder ukusetshenziswa
I-Flibanserin Hydrochloride (i-CAS 147359-76-0) ithengiswa phantsi kwegama elithi "Addyi", iFlibanserin Hcl.
I-Raw Flibanserin iHCl powder Ukusetyenziswa
100mg nsuku zonke ngexesha lokulala.
Isilumkiso kwi-Raw Flibanserin hcl powder
I-Flibanserin Hydrochloride iyichaphazela indlela ingqondo esebenza ngayo ngokuphazamisa i-conmunication amone kwiingqondo zengqondo kwiindawo zobuchopho ezilawula isifiso sesondo kunye nezinye izinto ezonwabileyo. Unokubangela uxinzelelo lwegazi oluphantsi kunye nokuphelelwa amandla. Izigulana kufuneka zilale kwaye zifune uncedo lwezonyango ukuba zithinteka.
I-Flibanserin Hydrochloride i-sleeping igxininise kwaye iyancipha. Izigulane kufuneka ziphephe ukusetyenziswa kwamatshini, ukuqhuba okanye ukuqhuba ezinye izixhobo ezinobungozi okungenani i-6hours emva kokuthatha isantya ngasinye seFlibanserin Hydrochloride.
I-Flibanserin Hydrochloride Powder (i-CAS 147359-76-0)
I-Raw Flibanserin iHCl powder Marketing
Indlela yokuthenga iFlibanserin hcl powder (CAS 147359-76-0) esuka kwi-AASraw